Alaab -qeybiyeyaasha Kiimikada Kale iyo Warshadda | Shiinaha Warshadaha Kiimikooyinka Kale
1.Waxaa lagu dhex guray bacaha la tolay ee balaastigga ah oo midkiiba yahay 25Kg, 25MT halkii 20FCL. 2. Lagu soo raray bacaha jumbo-ka-samaysan oo caag ah oo midkiiba yahay 1250Kg, 25 MT halkii 20FCL. 3.Sida waafaqsan shuruudaha macmiilka 1.Magnesium sulphate ee beeraha Sulfur iyo magnesium waxay siin karaan nafaqooyin hodan u ah dalagyada taas oo ka qayb qaadata koritaanka dalagga oo kordhisa wax soo saarka, waxay kaloo gacan ka geysanaysaa dabcinta ciidda iyo hagaajinta tayada ciidda. Astaamaha maqnaanshaha “baaruud” iyo “magnesium”: 1) waxay ...
Calcium chloride waa cusbo aan dabiici ahayn, oo u jirta sida adag ama dareere. Kalooriin kalsiyum oo adag waa walax cad oo dhalaalaysa oo ah qaab jaalle ah, granule, pellet ama budo. Iyada oo ay ku jiraan waxyaabo kala duwan oo biyo ah, waxay noqon kartaa fuuqbax ama fuuqbax. Kaalshiyamka kaalshiyamka ah ee dareeraha ah waa xal aan midab lahayn, oo cad. Sida kaalshiyamka kaalshiyamku u leeyahay sifooyin sida deg deg deg deg ah, karti qalaad, soo jiidashada qoyaanka hawada iyo hareeraha, ku milma heerkul aad u hooseeya II.Features: Calciu ...
1. Maadaama uu yahay wakiil duulaya, dhexdhexaadiyaha iyo hagaajinta cajiinka, soodhaha dubista waxaa loo isticmaali karaa roodhida waxaana loo isticmaali karaa si habboon iyadoo loo eegayo baahida wax soo saarka. 2. Bacda soodhada waxaa loo isticmaali karaa nadiifinta guriga, sida dhaqidda khudaarta iyo miraha, dharka iyo codsiyada kale ee nadaafadda marka la codsado. 3. Quudinta Fasalka Soodhaha Fasalka waxaa inta badan loo adeegsadaa biyo -biyoodka si loo hagaajiyo qiimaha PH ee biyaha barkadda 4. Warshadaha caagga ah, waxaa loo adeegsadaa soo saaridda caag iyo isbuunyo. 5. Daabacaadda iyo midabaynta ...
Ammonium chloride NH4CL granular White crystal budada ama granule; aan ur lahayn, dhadhamin milix iyo qabow. Si dhib yar u koraysa ka dib nuugista qoyaanka, ku milmi kara biyaha, glycerol iyo ammonia, ayaa ku milmi kara ethanol, acetone iyo ethyl, waxay ku baxdaa 350 waxayna ahayd aashitada daciifka ah ee aqueous solution. Biraha birta ah iyo biraha kale ayaa daxalaysta, gaar ahaan, daxalka weyn ee naxaasta, saamaynta aan daxalka lahayn ee birta doofaarka. Codsiga darajada beeraha Ammonium chloride: Darajada beeraha Ammonium ...
1.Diyaarinta Xalka: Heerka kala dirista PAC waa 5%. Waxay la macno tahay ku milm 5g PAC 100ml biyo ah. 2.Disolution medium: Biyaha waa biyaha qasabada ama biyaha la sifeeyay. 3.Wakhtiga Kala Bixi: Wakhtigu waa 5-10 daqiiqadood haddii aad si buuxda ugu walaaqdo milanka. 4.Dosage: Hel muunad biyo ah oo xaqiiji qiyaasta ugu fiican imtixaan. 00: 0000: 23 Polyaluminum Chloride. 1. Ku dar Kloride Polyaluminium No.3 .Kulliyuhu Polyaluminium chloride biyo 3. Ku dar dareeraha biyaha 4.Isu dar dareeraha biyaha iyo ...
1. Macdanta Dhuxusha: dab -demiye uesd miin qabow 2. Daaweynta biyaha: magnesium chloride lafteeda ayaa si dhakhso ah uga saari kara wasakhda biyaha ku jirta, mana keento laba wasakh. waxay si gaar ah ugu habboon tahay in lagu daweeyo nabdoonaanta biyaha wasakhaysan ee weyn. 3.Being oo ah alaabta ceeriin ee aan muhiimka ahayn ee warshadaha kiimikada, waxaa loo adeegsadaa soo saarida xeryaha magnesium sida magnesium carbonic acid, magnesium hydroxide iyo oxide magnesium, iwm.